LA ARENA APARTMENT - I-Airbnb
LA ARENA APARTMENT
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIsabel
Enye yezindlu ezenza iCasona de Las dos torres, ehlala kwiDolophu eNdala yaseIsla., Phambi kweBhotwe elimangalisayo le-Counts of Isla, 1 km. ukusuka kulwandle lwaseArena kunye neQ yomgangatho kwaye kufutshane neTransmiera Ecopark.
Yokuhlala emaphandleni charm kunye uhombiso ngenyameko kunye lokulala, ikhitshi yaxhobisa ngokupheleleyo, igumbi abaphila ne tv, DVD, Terrace, WiFi, cinema ekhaya, ziko evuthayo iinkuni kunye lokuhlambela epheleleyo kunye hydromassage, ukonwabela iintsuku ezimbalwa yokuphumla phakathi kolwandle nentaba .
Ifumaneka kwiZiko leMbali ye-Isla,.
Kwi-100m baneendawo zokutyela ezi-2 apho unokonwabela i-gastronomy yale ndawo, kwaye i-1.5 km kude yindawo yabakhenkethi yase-Isla apho unokufumana khona iivenkile, iibhanki, inkonzo yezonyango, yonke into onokuyidinga kwiimfuno ezisisiseko.
Umbuki zindwendwe ngu- Isabel
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arnuero